Mas’uuliyiinta Soomaalida Kenya oo Gaashaanka u daruurtay in xilligan la celiyo Qaxootiga Dhadhaab | Baydhabo Online
Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamanka is-maamulka Gaarrisa Kenya, Maxamed Cali Sheekh, ayaa Gaashaanka u daruuray in Soomaalida ku nool Xeryaha Qaxootiga ee Dhadhaab ay gabbaad siiyaan Kooxda Al-Shabaab ama laga soo maleego falalka argagixisanimo.
Hadalkan mudane, Maxamed Cali Sheekh, ayaa jawaab u ahaa codsi uu Guddoomiyaha Gobolka Tana River ee Dalkaasi, Daado Godana u diray Dowladda dhexe, kaas oo ahaa in Dalkooda Hooyo lagu celiyo Qaxootiga Soomaaliyeed eek u nool Xeryaha Dhadhaab, maaddaama halkaasi laga soo abaabulo weerarrada ay Kooxda Al-Shabaab ka geysato gudaha Kenya.
Guddoomiye, Maxamed Cali, ayaa sheegay in Dadka Qaxootiga ah ay marti gelisay Dowladda is-maamulka Gaarrisa, wuxuuna hadalka , Daado Godane ku tilaamay mid isir nacayb ah, isla markaana uusan ka hadli Karin maaddaama aysan Dhadhaab ahayn degaankiisa.
Wuxuu sidoo kale Guddoomiyuhu walaac xooggan ka muujiyay hadalka Daada Godane, isagoo sheegay in ay ujeeddadu tahay mid uu ku doonayo in lagu wax yeelleeyo Dadka Soomaaliyeed ee deggen Gobolka Tana River, colaad sokeeyana uu ka abuuro halkaas.
Laamaha ammaanka ee Dalka Kenya ayuu ka codsaday in ay ka feejignaadaan hadallada ka imanaya Daado Godane, wuxuuna codsaday in lala xisaabtamo tallaabo sharci ahna laga qaado.